यी पाँच समस्या भएका व्यक्तिले कागती पानी खानु झन खतरा ! – Life Nepali
यी पाँच समस्या भएका व्यक्तिले कागती पानी खानु झन खतरा !
काठमाडौं– कागती पानी खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । चिकित्सकहरुले समेत विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या न्यून पार्न कागती पानी खान सल्लाह तथा परामर्श दिन्छन् ।तर, कागती पानी खानु केही व्यक्तिहरुका लागि भने खतरा हुने गर्छ । स्वास्थ्यमा के कस्ता समस्या हुँदा कागती पानी नखाने ? यस विषयमा केही टिप्सः-१. मुटुका रोगीहरु : मुटु सम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिले कागती पानी खानु उचित हुँदैन । यसमा एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ । कागती पानीको धेरै प्रयोग गर्नाले एसिडिटी वढ्ने, मुटुको जलन र एसिड रिफलक्स जस्ता समस्याले सताउने गर्छ । मुटुका रोगीहरु कागती पानीबाट टाढा बस्नु नै फाइदा हुन्छ ।
२. अल्सर भएका व्यक्ति:-अल्सर भएका व्यक्तिहरुका लागि पनि कागती पानी घातक बन्न सक्छ । त्यसैले यस्ता व्यक्तिले कागती पानी नखानु राम्रो हुन्छ । पेट दुख्ने र पोल्ने समस्याले अल्सरलाई झन मलजल गर्छ । यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउँछ ।३. दाँतको समस्या भएको व्यक्तिकागती पानी धेरै पिउनाले दाँतको इनामेल नष्ट भई टुक्रिने, फुट्ने र सेन्ट्रिभेट बढ्न सक्छ । दाँतको समस्या भएका व्यक्तिहरुले कागती पानी पिउन हुँदैन् । आफ्नो शरीरले खप्न सक्ने जति मात्र कागती पानी पिउन सकिन्छ । त्यस्तै पिसाबसँग सम्बन्धित समस्या भएको व्यतिmले कागती पानी पिउन उचित नहुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
४. डाइबेटिज र पत्थरीको सर्जरी गरेको व्यक्तिकागती पानीले छिटो पिसाब लाग्ने हुँदा पत्थरीको सर्जरी गरेका व्यक्तिहरुलाई कागती पानीले समस्या पार्छ । डाइबेटिज र पथरीको सर्जरी गरेको व्यक्तिलाई कागती पानी निकै घातक हुन्छ ।५ कफ र पित्तको समस्या भएको व्यक्तिकागती पानीले कफ र पित्त बढाउँछ । कफ र पित्तको समस्या भएको व्यक्तिले कफ र पित्त बढाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । कागती पानी पिउने बानीले आफ्नै शरीरलाई ठूलो समस्यामा पार्छ । स्वस्थ र व्यस्त रहन अत्यधिक कागती पानी पिउनबाट टाढा रहनुपर्छ ।विशेषज्ञका अनुसार कागतीमा पाइने एसिड र मानव शरीरमा पाइने एसिड मिश्रण हुँदा अझै स्वास्थ्य बिग्रने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले अधिक मात्रामा कागती पानीको सेवन स्वास्थ्यका लागि खतरा बन्न सक्छ ।
Previous मजस्ती केटीसँग विवाह गर्ने केटा नेपालमै छैन
Next मनसुन अझै एक हप्ता सम्म सक्रिय रहने,यसपालीको दशैँ हिले दशैँ हुने भयो